छोराछोरी समेत भैसकेकि श्रीमति जेल परेको सुन्दा कल्पनाका श्रीमान खुसि हुदै खोले यस्तो रहस्य! भिडियो सहित – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/छोराछोरी समेत भैसकेकि श्रीमति जेल परेको सुन्दा कल्पनाका श्रीमान खुसि हुदै खोले यस्तो रहस्य! भिडियो सहित
छोराछोरी समेत भैसकेकि श्रीमति जेल परेको सुन्दा कल्पनाका श्रीमान खुसि हुदै खोले यस्तो रहस्य! भिडियो सहित
कल्पनाका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा आएका छन् । कल्पना पनि आफ्नो दोस्रो श्रीमती भएको बताएका छन् । पहिलो श्रीमतीसंग बस्दै आएका कल्पनाका श्रीमानले आफुहरुको अहिले सम्म सम्बन्ध वि’च्छेद पनि नभएको र सम्बन्ध र सम्पर्क पनि नभएको बताएका छन् । आफुहरुको चार वर्ष यता कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका छन् । उनले छोरीको विवाहका विषयमा एक पटक मात्र फोनमा कुरा भएको बताएका छन् । आफुले छोरीको विवाह गरिदिन्छु भन्दा नमानेपछि आफ्नै तरिकाले गरिदिएको र आफु पनि नगएको बताएका छन् ।
उनले युटयुवमा घटनावारे जानकारी पाएको बताएका छन् । उनले कृष्णबहादुर वोहरालाई नचिनेको पनि बताएका छन् । उनले आफु काठमाडौ जाँदा कल्पनाको अरुसंग सम्बन्ध र सम्पर्क भएको थाहा पाएपछि आफुले कल्पनाको जिवन देखि निस्किएको बताएका छन् । उनले कल्पनावाट ३ छोराछोरी भएको बताएका छन् । उनले आफुसंगको सम्बन्ध विग्रिएका कारण कल्पनाले त्यस्तो गरेको होला भन्ने नसोचेको बताए । उनले भने, पहिला एउटा कुखुरा पनि का’ट्न नसक्ने कल्पनालाई मान्छे नै का’ट्ने आँट कसरी आयो ? म अचम्म परेको छु’ उनले भने ।
कल्पनाको माइती पक्ष र अरुले पनि छोराछोरीको भविष्यको बारेमा प्रश्न उठेपछि अब आफुले छोराछोरी ल्याउने बताएका छन् । विवाह गरेर गएकी छोरी पनि आफ्नो भाईलाई स्याहार सुसार गर्नु भनेर भन्न आएको पनि बताएका छन् । ‘विवाह गरेर गएपछि छोरी आएकै थिइनन्, तर आज छोरी पनि घर आएर भाईको रो’एर बेहाल छ भाईलाई हेर्नुपर्यो ‘ भनेर गएको बताएका छन् । उनले आफ्ना छोराछोरीको जिम्मा आफुले लिने बताएका छन् ।
सीताराम हाछेथु महानगर प्रहरी प्रमुख नियुक्त
हे भगवान के भयो यस्तो सबै पैसाको लागी गरिएको खेल पो रहेछ दि’नेश’ ले ब*ला’त्कार गरेको है’न भा’गरथी’की आ’मा भ’न्नुहु’न्छ फ’साइय’को हो